डा. प्रतिक्षा पौडेलसहित दुई चिकित्सक कोरोना मुक्त – Radio Prabhav 92.4 Mhz
September 11, 2020 गृहपुष्ठ / समाज
चितवन, भदौ २६, शुक्रबार –
चितवनमा डा. प्रतिक्षा पौडेलसहित दुई चिकित्सक कोरोना मुक्त भएका छन् । भदौ ४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आफै कार्यरत पुरानो मेडिकल कलेजको आइसोलेसनमा बसेकी डा. प्रतिक्षा २१ दिनपछि कोरोना मुक्त भएकी हुन् । उनीसगौ संक्रमित बनेकी अर्की डा.श्रीया गौतम पनि हिजो कोरोना मुक्त भएकी हन् ।
कक्षा १२ सम्म बुढा निलकण्ठ मावि काठमाडौँमा अध्यययन गरेकी डा. भरतपुरमा रहेको कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) विडिएस सकेर विगत एक बर्षदेखि डेन्टल चिकित्सकको रुपमा कार्यरत थिईन् । कहिले दिवा त कहिले रात्री पहरामा रहदै उनले विरामीहरुको सेवा गर्दै आएकी थिईन् ।
सोही क्रममा उनी कोरोना संक्रमित बनिन् । सानैदेखि सरल र निडर स्वभावकी डा। प्रतिक्षा पौडेलले आत्मबलका कारण सजिलै कोरोनालाई जितेको बताइन् । देश र जनाको लागि सेवा गरिरहदाँ आफु संक्रमित हुन पुगेको भन्दै उनले कोरोनालाई सजिलै जित्न सकिन्छ भनेर आत्मल बनाएको र अहिले संक्रमण मुक्त भएको बताईन् । अब पुन : विरामीको सेवामा निरन्तर लाग्ने डा प्रतिक्षाले बताइन् ।
कोरोनालाई आत्म बलले सजिलै परास्त गर्न सकिने भएकाले कोरोना संक्रमितलाई हेलाको दृष्टिले नहेर्न सबैलाई आग्रह पनि गरिन् । घर परिवार र आफन्तहरुको हौसला र प्रेरणाले आफुले कोरोनालाई सजिलै जितेको बताइन् । यस्तै डा. श्रीयाले जो सुकैलाई पनि कोरोना लाग्न सक्ने भएकाले आवश्यक स्वास्थ्य संमयता अपनाउन आग्रह गर्दै लागीहालेमा आत्मबल बलियो बनाउन आग्रह गरिन् ।
सीपीएलकाे उपाधि ट्रिनबागो नाइट राइडर्सलाई